"အဝေးနယ်က ငါ့လိပ်ပြာလေးသို့…." ~ မျိုးကို
03:29 Poem No comments
တစ်ထောင့်တစ်ညကို ငါတို့ ဆွဲဆန့်မယ်…
သို့…. ငါ့အချစ်ဆုံး လိပ်ပြာလေးရေ…
ခပ်စိတ်စိတ်လေး မင်းလှမ်းပေးပါ…ချစ်သူ…။ ။
(ဒီကဗျာလေး ပြန်ဖတ်မိရင် ချစ်သူ အမြန်ပြန်လာနိုင်ပါစေ)
Source:The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network by စေပိုင်ထွဋ် (ပုသိမ်)